जीवनशैली – Everest Pati
“पैसाको लागि स्वाभिमान बेच्ने नेपालीको बानी नै छैन”
श्रीमान् होस् त विनोद जस्तो,सात जन्मसंगै हुने वाचा पुरा गर्दै यस्तो…
‘डियर कमरेड’ रश्मिका कसरी सफल अभिनेत्री बनिन् ?
शान्तिनगर गाउँपालिका-३ भलानेटीका ४० वर्षीय पशुपति घर्ती मगरलाई अचेल खसीबोका खोज्न भ्याइनभ्याई छ। उनी खसी खोज्दै दाङ, सल्यान, प्युठान र रूकुमसम्म कुदिरहन्छन्। हिन्दु नेपालीहरूका ठूला चाड दशैं र तिहार नजिकिएछि उनको दौडधुप झनै बढ्छ।…
छोरा या छोरी दुवै समान हुन् । हाम्रो समाजमा छोरा र छोरीमा गरिने भेदभाव तथा गर्भपतनका कारण गर्भवती महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको लिङ्ग परिक्षण गरिनु गैरकानुनी मानिन्छ । तर, यदि भेदभावको दृष्टिकोणले नभई उत्सुकता मेटाउनको लागि छोरा र छोरी के छ…
पैतालामा यस्तो चिन्ह हुनेहरु हुन्छन् धेरै भाग्यमानी ! कतै तपाईको पैतालामा त छैन ?
एजेन्सी – ज्योतिष शास्त्रले हातका हस्तरेखा हेरेर भविष्य हेर्न सकिने त सबैलाई नै थाहा होला तर अहिले समुन्द्र शास्त्रले हातका रेखा मात्र नभईकन शरीरका विभिन्न भागका बनोटको आधारमा र त्यहाँ भएका रेखाका अधारमा मानिसको स्वभाव र भाग्य बताउन सकिने…
यस्ता लक्षण देखिए हुनसक्छ स्त’न क्यान्सरको खतरा
कतिपय महिलामा स्तन क्यान्सर हुने गर्दछ । स्तनको कोष असामान्य बढ्नुलाई स्तन क्यान्सर भनिन्छ । महिलाहरुमा हुने क्यान्सरमा स्तन क्यान्सर दोस्रोमा पर्दछ । स्तन क्यान्सर प्रायः दूध उत्पादन गर्ने नलीदेखि सुरुवात हुने गर्दछ । स्तन क्यान्सर हुनु…
काठमाडौँ । मानिसहरु स्वास्थ्य रहन के सम्म गर्दैनन् । खानपानदेखि जीवनशैलीसम्म सुधारगर्न लागि पर्दछन् । तर शरीरलाई स्वास्थ्य राख्न अति उपयोगी हुने किसमिसका गुणका बारेमा सायदै धेरै कमलाई थाहा होला । किसमिसको स्वादमात्र होइन यसको प्रभाव र…
बिहान उठ्ने बितिकै खाली पेटमा नरिवलको पानीमा मह मिसाएर पिउनुहोस्, मिल्नेछन् यस्ता फाइदा !
हरेक दिन खाली पेटमा नरिवल पानीको सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ। यसमा अत्यधिक मात्रामा रहेको पौष्टिक तत्वले गर्दा प्रदुषित वातावारणमा पनि नरिवल पानीको सेवनले स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्दछ। साथै यसले किटाणुहरुलाई पनि शरीरबाट…
स्वास्थ्यको लागि आलु र सखरखण्डमा कुन बढी फाइदाजानक ?
आलुलाई तरकारीहरुको राजा भनिन्छ। हामी प्राय: हरेक तरकारीमा आलु मिसाउने गर्छौं। यो स्वादिष्ट हुनुको साथै लाभदायक पनि छ। सखरखण्ड पनि यस्तै हो। यो पनि स्वादिष्टका साथै निकै स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। आलुमा पोटाशियमको साथै फाइबर पनि प्रचुर मात्रमा…
खुशी कसरी हुने ? थाहा पाउनुहोस् खुशी हुने ११ तरिका
निराशाको अनुभव हुनु असफलता हो । यसले हाम्रो कार्यक्षमतालाई नाश गरिदिन्छ । हामीले सर्वप्रथम आफ्नो स्थान निर्धारण गर्नुपर्छ । आफैँप्रति इमान्दार हुनपर्छ, आफैँसँग प्रतिशपर्धा गर्नुपर्छ । खुशी रहनका लागि यस्ता कुराहरुले धेरै अर्थ राख्दछन् ।…
मरिचको प्रयोगबाट यसरी कपाल झर्न रोक्न सकिन्छ (तरिकासहित)
उमेर ढल्कदै गएपछि कपाल झर्दै जानु त स्वभाविकै हो । तर जवानीमै कपाल झर्नु चिन्ताको बिषय हो । यो महिला वा पुरुष जो सुकैमा पनि हुन सक्छ । युवावस्थामै कपाल झरेर तालु देखिएको कसलाई राम्रो लाग्ला र ? तर कहिले काँही यस्तो नचाहँदा नचाहँदै पनि…
सावधान ! चुइङगम चपाउँदा हुन्छ यस्ता ५ बेफाइदाहरु
तपाईमा चुइङ्गम चपाउने बानि कत्तिको छ ? तपाईले चुइङ्गम चपाउँदा फाईदा नै होला भन्ने सोच्नु भएको छ होला । तर तपाईको त्यो सोचाई गलत हो । त्यसले तपाईको स्वास्थ्यमा बिभिन्न असर गरिरहेको हुन्छ । बच्चा तथा किशोरहरुमा चुइङगम चबाउने बानीले टाउको…